Dambudziko remwedzi wemoyo ikozvino rakagadzirira | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura iyi dambudziko nyowani, iro rave rakajairika muna Kukadzi, rakaburitswa uye pakati pezuro masikati nanhasi mangwanani, vazhinji vashandisi veApple smart wachi vakagamuchira chiziviso pane wachi. Muvhuro unotevera, Kukadzi 8 inotanga zororo rino rinotora svondo uye mune iro chete chinangwa chekuita kuti vashandisi vafambe uye vaite maekisesaizi.
Iri idambudziko rakareruka uye iro iro vese vashandisi veApple Watch vanogona kuzadzikisa. Chero zvazvingaitika chakakosha kurovedza muviri uye kufamba kuva nehutano hwakanaka, saka zvinogara zvichikosha kuita kurovedza muviri uye nematambudziko aya vanhu vazhinji vanokurudzirwa kuzviita.
Pedzisa mhete yekurovedza muviri Kukadzi 8-14
Nezve izvi zvakaringana kutora zvitambi zvekugovana mumameseji ako uye menduru yavanopa mune iri dambudziko remwedzi wemoyo. Haisi dambudziko rakaoma Kana zvasvika pakushanda nesimba, kufamba kwehafu yeawa pazuva pazuva rino uye ndizvozvo, saka tinovimba kuti mese munowana.
Imwe chete yekuwedzera kuedza kwatinofanira kuita mune ino ndeyekuti mazuva manomwe akateedzana uye chete mukati mevhiki rino, kana tikasvetuka zuva rimwe isu tinorasikirwa nemukana wekukunda iro dambudziko saka isu tese tinoedza kuhwina mubairo uye pamusoro pezvose kuvandudza maitiro edu. Mupfungwa iyi, kufamba kwemazuva manomwe akateedzana kunogona kutiita kuti tisungirire ita mitambo kana kufamba nguva dzose uye izvi ndizvo zvinotsvakwa mumhando iyi yedambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko remwedzi wemoyo ikozvino rakagadzirira
Nyowani Apple TV 4K inowanikwa muTVOS 13.4 beta